E nwere usoro on My iPhone Screen! Nke a bụ ndozi ahụ. - Iphone
kedu ihe mere na agaghị m emelite elekere elekere apple m
ozi iji gbanyụọ iphone 6
kedu ihe kpatara na agaghị m ejikọ na wifi na ekwentị m
gịnị kpatara na enweghị m ike ịkpọ ekwentị
E nwere usoro on My iPhone Screen! Nke a bụ ndozi.
’Re na-ahụ ahịrị na ihuenyo gị iPhone ma ị maghị ihe kpatara ya. Nsogbu a na - apụtakarị mgbe eriri USB LCD nke iPhone gị kwụsịrị na bọọdụ mgbagha ya, mana ọ nwekwara ike ịbụ nsogbu ngwanrọ. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ihe mere e ji na-edoghi na gị iPhone ihuenyo na-egosi gị otú idozi nsogbu maka ihe ọma !
Nke mbu, ka anyi gbalịa wepu obere glitch ngwanrọ. Ibidogharịa iPhone gị ga-eme ka mmemme ya niile mechie, nke nwere ike idozi nsogbu na-eme ka ahịrị pụtara na ngosipụta iPhone gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ụdị iPhone 8 ma ọ bụ okenye, pịa ma jide bọtịnụ ike ruo mgbe slide ka ike gbanyụọ ogosiri na enyo. Na iPhone X ma ọ bụ ihe atụ ọhụụ, n'otu oge pịa ma jide ma olu olu na bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe slide ka ike gbanyụọ na-egosi.
Swipe akara ọcha na acha uhie uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie iPhone gị. Chere a ole na ole sekọnd, wee pịa ma jide ike button (iPhone 8 na mbụ) ma ọ bụ n'akụkụ button (iPhone X na ọhụrụ) ruo mgbe Apple logo na-egosi na etiti nke ngosipụta.
N'ọnọdụ ụfọdụ, ahịrị ndị dị na ihuenyo iPhone gị ga-abụ ihe mgbochi na ị gaghị ahụ ihe ọ bụla na ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na ahịrị dị na ihuenyo iPhone gị na-egbochi echiche gị kpamkpam, ịnwere ike ịmalitegharị ya site na ịme nrụpụta siri ike. A ike nrụpụta inikiet inikiet atụgharị gị iPhone anya na azụ na.
Zọ siri ike tọgharịa iPhone dabere na iPhone ị nwere:
iPhone 6s na ụdị ndị mbụ : Pịa n'otu oge pịa ma jituo bọtịnụ Home na bọtịnụ ike ruo mgbe ị hụrụ akara ngosi Apple na-acha ọkụ na ihuenyo.
iPhone 7 na iPhone 7 Plus : Pịa ma jide bọtịnụ olu ala na bọtịnụ ike n'otu oge ruo mgbe akara logos na-egosi na etiti ihuenyo ahụ.
iPhone 8 na ụdị ndị ọhụrụ : Pịa ngwa ngwa ma hapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa bọtịnụ olu ala, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ. Mgbe akara Apple gosipụtara na ngosipụta ahụ, hapụ bọtịnụ n'akụkụ.
Ọ nwere ike were 25-30 sekọnd tupu akara Apple apụta, yabụ nwee ndidi ma adala mba!
Anyị na-akwado akwado gị iPhone ozugbo enwere ike ọ bụrụ na a ka nwere ahịrị na ihuenyo ahụ. Nke a nwere ike ịbụ oge ikpeazụ ị ga-akwado ma ọ bụrụ na iPhone gị mebiri emebi ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na mmebi mmiri.
Ichekwa ndabere gị iPhone na-echekwa otu ozi niile dị na ya. Nke a gụnyere foto gị, kọntaktị, vidiyo, na ndị ọzọ!
Nwere ike iji iTunes ma ọ bụ iCloud kwado iPhone gị. Ga-achọ USB Lightning na kọmputa nwere iTunes ka ndabere gị iPhone ka iTunes . Ọ bụrụ na ị chọrọ ndabere gị iPhone ka iCloud , ịchọghị eriri ma ọ bụ kọmpụta, mana ị ga-achọ ohere nchekwa iCloud zuru ezu iji chekwaa nkwado ahụ.
Ngwaọrụ Firmware Update (DFU) weghachi bụ ụdị kachasị dị omimi nke weghachite iPhone na ọ bụ usoro ikpeazụ anyị nwere ike ịme iji wepụ nsogbu ngwanrọ. Nke a na ụdị weghachi erases na reloads niile koodu gị iPhone, na-eweghachiri ya na ya factory defaults.
Anyị ike ịkwado ichekwa ndabere nke ozi na gị iPhone tupu etinye ya na DFU mode. Lelee ntuziaka anyị-site-nzọụkwụ mgbe ị dị njikere tinye gị iPhone na DFU mode !
Ihuenyo Mmezi Nhọrọ
Ọtụtụ oge, ahịrị dị na ihuenyo iPhone gị bụ nsonaazụ nke nsogbu ngwaike. Ọ nwere ike ime mgbe ị dobe iPhone gị na ala siri ike, ma ọ bụ ọ bụrụ na iPhone gị ga-ekpughere mmiri mmiri. Vetikal edoghi na ngosipụta nke gị iPhone bụ Elezie onye na-egosi na LCD USB na-agaghịkwa ejikọrọ na mgbagha osisi.
Debe oge atọrọ na Storelọ Ahịa Apple gị iji zute onye ọrụ ntanetị, ọkachasị ma ọ bụrụ na AppleCare + Plan Plan kpuchie iPhone gị. Anyị na-akwado Pulse , na-na-ina idozi ụlọ ọrụ nwere ike izipu a gbaara ka technician ozugbo n'ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ha nwere ike ịnọ ebe ahụ iji nyere gị aka idozi nsogbu kwụ ọtọ na iPhone gị n’ime nkeji iri isii!
Enweghị Lines ọzọ!
Enwere m olileanya na isiokwu a nyeere gị aka idozi iPhone gị ma ọ bụ chọta nhọrọ nhọrọ ga-enyere gị aka idochi ihuenyo ya ozugbo enwere ike. Ugbu a na ị maara ihe kpatara e ji nwee ahịrị na ihuenyo gị iPhone, gbaa mbọ kesaa isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta yana ezinụlọ na ndị enyi! Hapụ ajụjụ ọ bụla ị nwere maka anyị na ngalaba nke dị n'okpuru.